Ungayibona Sebenzisa PayPal Futhi Futhi umugqa Ndawonye Nge Clickfunnels - Uphondo Of The Day
Wena setting up ibhizinisi lakho web-based futhi udinga ukuvumela abantu ninezinto ukukhokhela izinsiza zakho.
Izindaba ezinhle ukuthi unga kusukela isofthiwe isekela okungenani 15 kuphuma ehlukile yokukhokha.
Ukungeza PayPal kungcono kancane more xaka ngoba uzodinga ukudala inkinobho e lewebhu lakho futhi ukusebenza eziningana izilungiselelo kusuka ku-akhawunti yakho futhi ngaphakathi uphondo ukudala nemingcele ukuthi ngeke alawule Sells yakho.
Umugqa ukuhlanganiswa isendleleni kulula njengoba nje kudingeka kuzodala isixhumanisi ukuhlanganiswa kusukela Clickfunnels akhawunti yakho ye-Umugqa wakho futhi usethe igama lebhizinisi lakho ne inqubo ukugunyaza bobabili.
Ngemva kwalokho, uzoba kwenziwe futhi ikhasimende lakho kuyodingeka ukukhetha ukuvumela uhola ngaphezulu.